MSME Books - Business Centric Network (BCN)
November 12, 2018 January 21, 2019 San Thida
⁉️မိတ်ဆွေ သင်က လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသူလား။
အထက်ပါ အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ??ဖြေရှင်းပေးမည့်
☁️?MSME Books ကို Business Centric Network က မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
☁️?MSME Books နဲ့ မိတ်မဆက်ခင်မှာ ဘာကြောင့် ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software (ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင်စနစ်) ကိုလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးသင့်သလဲ ဆိုတာလေးကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
၁) ?Spreadsheet သုံးနေတာ လုပ်ငန်းအတွက် မလုံလောက်ပါဘူး။
လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ ?Spreadsheet အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
တစ်ချို့ကလဲ ?လယ်ဂျာစာအုပ်တွေ အသုံးပြုကြပါတယ်။
?Spreadsheet (သို့ ) ?လယ်ဂျာစာအုပ်တွေ အသုံးပြုကြတာ ဘာမှ မရှိတာနဲ့ စာရင်တော့ ?ကောင်းပါတယ်။
?အားနည်းချက်ကတော့ အချိန်ကြာတယ်။ ?‍?အသုံးပြုသူ တစ်ဦးထက် ပိုအသုံးပြုလို့မရပါဘူး။
?ပျက်စီး၊ပျောက်ဆုံးတာ၊ ?သိမ်းထားဖို့ နေရာလိုအပ်တာတွေရှိပါတယ်။
၂) ?‍?‍?‍?အသုံးပြုသူ တစ်ဦးထက် ပိုမို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
?လုပ်ငန်းကြီးထွားလာတာနဲ့ အမျှ သုံးစွဲသူ အရေအတွက် ပိုမိုလိုအပ်လာပါတယ်။
?‍?‍?‍?အသုံးပြုသူ တစ်ယောက်နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
??‍?လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးအနေနဲ့လည်း စာရင်းကိုင်က ?စာရင်းဇယားတွေထည့် ပြီးရင်၊ မိမိ ရှိတဲ့ နေရာကနေ လုပ်ငန်းရဲ့ ?အစီရင်ခံစာ တွေကိုကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။
ကုန်အမှာစာတင်ဖို့ ကုန်လက်ကျန်အရေအတွက်၊ ငွေကောက်ခံဖို့ ရရန်ရှိစာရင်းများ၊ ကုန်ကြွေးပေးဖို့ ပေးရန်ရှိစာရင်းများကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၃)??သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍရေးအခြေအနေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရဲ့ အစမ်းရှင်းတမ်း၊လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊အရှုံး၊အမြတ်စာရင်း နဲ့ အခြား အစီရင်ခံစာများကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ရပါမယ်။
ပြိုင်ဖက်တွေက အသုံးပြုနေပြီး၊သင်ကမသုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ⏲️အချိန်ကြန့်ကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပြိုင်ဖက်က သင့်ထက်ခြေတစ်လှမ်းသာ နေပြီဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
?စာရင်းဇယားတွေမကြိုက်ဘူး၊ ?ကိန်းဂဏန်းတွေမကြိုက်ဘူး ဆိုပေမည့်လည်း လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးအနေနဲ့ စာရင်းဇယားတွေနဲ့ ?ကင်းကွာလို့မရပါဘူး။
☁️???ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင်စနစ် ဆိုတာ အသုံးပြုသူတွေ လွယ်ကူအောင် လုပ်ဆောင်ထားပြီး၊ လိုအပ်တဲ့ ?အချက်အလက်များကို ?အချိန်မှန်မှန်လေး ထည့်သွင်းလိုက်တာ နဲ့ လိုအပ်တဲ့၊ ရှိသင့်တဲ့ ?အစီရင်ခံစာ တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရရှိနိုင်တာမို့ အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ လူတိုင်း ?Smart Phone လေးတွေ အသုံးပြုနေကြတာမို့ အရမ်းတော့ မခက်ခဲပါဘူး။
လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software လေးစတင် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ MSME Books လေးရှိပါတယ်။
MSME Books ကဘာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်လဲ။
?အရောင်းစာရင်း (လက်ငင်း၊ အကြွေး)
?အဝယ်စာရင်း (လက်ငင်း၊ အကြွေး)
?ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်၊ အရောင်း နှင့် လက်ကျန်စာရင်း
?ဝန်ထမ်းလစာ ပေးချေမှု စာရင်း
?အထွေထွေ အသုံးစရိတ် စာရင်း
?ဘဏ်နှင့်ငွေသား အဝင်၊ အထွက် နှင့် လက်ကျန်စာရင်း
?ရရန်ရှိ နှင့် ပေးရန်ရှိစာရင်း
?လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် တန်ဖိုးလျော့စာရင်း
?အခြားသော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ
စတင်အသုံးပြုရန်အတွက် လစဉ်ကြေး ?၃၀,၀၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်ပါတယ်။
မြန်မာငွေနဲ့မို့ ငွေဈေးအတက်၊အကျကို ?စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
အသုံးပြုရန်အတွက် internet connection နှင့် ?ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။
ဝယ်သူအား ပြေစာ ထုတ်ပေးရန်အတွက် ?️Printer (ပုံနှိပ်စက် အသေး) တစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ?‍??‍?ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အတွက် ဘာသာစကား အခက်အခဲ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ☎️09 977 160 671 ~ 3, ☎️09 254 677 192, ☎️09 795 560 474 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
⁉️မိတျဆှေ သငျက လကျရှိစီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုကို ဦးဆောငျနသေူလား။
အထကျပါ အခကျြတှနေဲ့ကိုကျညီပွီဆိုရငျတော့ မိတျဆှရေဲ့ အခကျအခဲတှကေို ??ဖွရှေငျးပေးမညျ့
☁️?MSME Books ကို Business Centric Network က မိတျဆကျပေးပါရစေ။
☁️?MSME Books နဲ့ မိတျမဆကျခငျမှာ ဘာကွောငျ့ ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software (ကှနျပွူတာသုံးစာရငျးကိုငျစနဈ) ကိုလုပျငနျးတှမှော သုံးသငျ့သလဲ ဆိုတာလေးကို အရငျပွောပွခငျြပါတယျ။
၁) ?Spreadsheet သုံးနတော လုပျငနျးအတှကျ မလုံလောကျပါဘူး။
လုပျငနျးတျောတျောမြားမြားမှာ ?Spreadsheet အသုံးပွုနကွေပါတယျ။
တဈခြို့ကလဲ ?လယျဂြာစာအုပျတှေ အသုံးပွုကွပါတယျ။
?Spreadsheet (သို့ ) ?လယျဂြာစာအုပျတှေ အသုံးပွုကွတာ ဘာမှ မရှိတာနဲ့ စာရငျတော့ ?ကောငျးပါတယျ။
?အားနညျးခကျြကတော့ အခြိနျကွာတယျ။ ?‍?အသုံးပွုသူ တဈဦးထကျ ပိုအသုံးပွုလို့မရပါဘူး။
?ပကျြစီး၊ပြောကျဆုံးတာ၊ ?သိမျးထားဖို့ နရောလိုအပျတာတှရှေိပါတယျ။
၂) ?‍?‍?‍?အသုံးပွုသူ တဈဦးထကျ ပိုမို အသုံးပွုဖို့လိုအပျပါတယျ။
?လုပျငနျးကွီးထှားလာတာနဲ့ အမြှ သုံးစှဲသူ အရအေတှကျ ပိုမိုလိုအပျလာပါတယျ။
?‍?‍?‍?အသုံးပွုသူ တဈယောကျနဲ့ မလုံလောကျပါဘူး။
??‍?လုပျငနျးရှငျ တဈဦးအနနေဲ့လညျး စာရငျးကိုငျက ?စာရငျးဇယားတှထေညျ့ ပွီးရငျ၊ မိမိ ရှိတဲ့ နရောကနေ လုပျငနျးရဲ့ ?အစီရငျခံစာ တှကေိုကွညျ့ရှုဖို့လိုအပျလာပါတယျ။
ကုနျအမှာစာတငျဖို့ ကုနျလကျကနျြအရအေတှကျ၊ ငှကေောကျခံဖို့ ရရနျရှိစာရငျးမြား၊ ကုနျကွှေးပေးဖို့ ပေးရနျရှိစာရငျးမြားကို အခြိနျနဲ့ တဈပွေးညီသိဖို့လိုအပျပါတယျ။
၃)??သငျ့လုပျငနျးရဲ့ ဘဏ်ဍရေးအခွအေနကေို အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီသိဖို့လိုအပျပါတယျ။
လုပျငနျးရဲ့ အစမျးရှငျးတမျး၊လကျကနျြရှငျးတမျး၊အရှုံး၊အမွတျစာရငျး နဲ့ အခွား အစီရငျခံစာမြားကိုလညျး လိုအပျတဲ့ အခြိနျမှာ အလှယျတကူ ကွညျ့ရှုနိုငျရပါမယျ။
ပွိုငျဖကျတှကေ အသုံးပွုနပွေီး၊သငျကမသုံးသေးဘူးဆိုရငျတော့ အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခမြှတျဖို့ အတှကျ လိုအပျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ⏲️အခြိနျကွနျ့ကွာနမေယျဆိုရငျတော့ ပွိုငျဖကျက သငျ့ထကျခွတေဈလှမျးသာ နပွေီဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။
?စာရငျးဇယားတှမေကွိုကျဘူး၊ ?ကိနျးဂဏနျးတှမေကွိုကျဘူး ဆိုပမေညျ့လညျး လုပျငနျးရှငျ တဈဦးအနနေဲ့ စာရငျးဇယားတှနေဲ့ ?ကငျးကှာလို့မရပါဘူး။
☁️???ကှနျပွူတာသုံးစာရငျးကိုငျစနဈ ဆိုတာ အသုံးပွုသူတှေ လှယျကူအောငျ လုပျဆောငျထားပွီး၊ လိုအပျတဲ့ ?အခကျြအလကျမြားကို ?အခြိနျမှနျမှနျလေး ထညျ့သှငျးလိုကျတာ နဲ့ လိုအပျတဲ့၊ ရှိသငျ့တဲ့ ?အစီရငျခံစာ တှကေို မိနဈပိုငျးအတှငျးမှာ ရရှိနိုငျတာမို့ အရမျးကို လှယျကူပါတယျ။
အခုခတျေမှာ လူတိုငျး ?Smart Phone လေးတှေ အသုံးပွုနကွေတာမို့ အရမျးတော့ မခကျခဲပါဘူး။
လူကွီးမငျးတို့ အနနေဲ့ လုပျငနျးတိုငျးမှာ ရှိသငျ့တဲ့ ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software လေးစတငျ အသုံးပွုမယျဆိုရငျတော့ MSME Books လေးရှိပါတယျ။
MSME Books ကဘာတှေ လုပျဆောငျနိုငျလဲ။
?အရောငျးစာရငျး (လကျငငျး၊ အကွှေး)
?အဝယျစာရငျး (လကျငငျး၊ အကွှေး)
?ကုနျပစ်စညျးအဝယျ၊ အရောငျး နှငျ့ လကျကနျြစာရငျး
?ဝနျထမျးလစာ ပေးခမြှေု စာရငျး
?အထှထှေေ အသုံးစရိတျ စာရငျး
?ဘဏျနှငျ့ငှသေား အဝငျ၊ အထှကျ နှငျ့ လကျကနျြစာရငျး
?ရရနျရှိ နှငျ့ ပေးရနျရှိစာရငျး
?လုပျငနျးသုံးပစ်စညျးမြား၏ ပိုငျဆိုငျမှု နှငျ့ တနျဖိုးလြော့စာရငျး
?အခွားသော စာရငျးအငျးဆိုငျရာ လုပျဆောငျမှုမြား
စတငျအသုံးပွုရနျအတှကျ လစဥျကွေး ?၃၀,၀၀၀ ကပျြသာ ကသြငျ့ပါတယျ။
မွနျမာငှနေဲ့မို့ ငှဈေေးအတကျ၊အကကြို ?စိတျပူစရာမလိုပါဘူး။
အသုံးပွုရနျအတှကျ internet connection နှငျ့ ?ကှနျပွူတာ တဈလုံးလိုအပျပါတယျ။
ဝယျသူအား ပွစော ထုတျပေးရနျအတှကျ ?️Printer (ပုံနှိပျစကျ အသေး) တဈလုံးလိုအပျပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံသား ?‍??‍?ကြှမျးကငျြပညာရှငျမြား မှ ဝနျဆောငျမှုပေးနတေဲ့ အတှကျ ဘာသာစကား အခကျအခဲ စိတျပူစရာမလိုပါဘူး။
အသေးစိတျ သိရှိလိုပါက ☎️09 977 160 671 ~ 3, ☎️09 254 677 192, ☎️09 795 560 474 သို့ ဆကျသှယျစုံစမျးနိုငျပါတယျ။
Previous postDigital Accountants